हवाइ टिकट काट्न तयार रहनुहोस्, तय भयो बुकिङ खुल्ने मिति ! - Media Dabali
हवाइ टिकट काट्न तयार रहनुहोस्, तय भयो बुकिङ खुल्ने मिति !
काठमाडौं- सरकारले भदौ ५ गते देखि आन्तरिक उडान खुला गरेको छ । याेसँगै अब वायुसेवा कम्पनी बुकिङ खुलाउने तयारीमा रहेका छन् ।
सुरुमा अब सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उडान खुला हुने गन्तब्यको सूची दिनेछ र सोही आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई परमिट दिने छ ।
यद्यपी अहिले एक तिहाइ उडानमात्रै खुल्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ असोजबाट आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै अब उड्यन कम्पनीहरु भने १ असोजबाट बुकिङ खुलाउने तयारीमा छन् ।
वायुसेवा कम्पनीहरु सरकारले गन्तब्य उडानको सुची तयार नपाए सार्वजनिक यातायात देशभर खुलाभएझैँ देशभर उडान गर्ने जनाएका छन् । नेपालमा १० चैत, रातको १२ बजेयता सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई यातायात बन्द छन् । सोही दिनबाट बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने १६ भदौबाट सिमित गन्तब्यका लागि खुला भइसकेको छ ।
लामो सयमदेखि बन्द आन्तरिक उडान खुला, सरकारले गर्याे यस्ताे निर्णय !
होटल र आन्तरिक हवाई उडान असोज १ गतेबाट खुल्ने
आन्तरिक उडानमा देखियो यस्तो तरंग, असोज ५ गतेदेखि उडान शुरु
शनिवार, आश्विन ३ २०७७०९:२१:३२